Mari & Kuwanda Amulet Mhete yeMweya Mammon - Magical Ring - Mweya - Nyika yeAmulets
Mari & Kuwanda Amulet Mhete yeMweya Mammon - Magical Mhete - Yekunamata Mhete
10 zvinhu zvasara
Saizi yedenderedzwa 4 4.5 5 5.5 6 6,5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Mhete yeMammon yemari uye kuwanda muBusiness iringi yakasarudzika mhete yemari ine sigil yeMammon uye yakakwana kune ese mari, kuwanda, hupfumi uye zvine hukama nehupfumi mune bhizinesi. Shevedza Mammon nekupfeka ringi yake uye iye achakubatsira iwe kupfuma kuburikidza neyako bhizinesi kuedza.
Mammoni ndiwo mweya wakakwana kana
• Uri kurwira kusangana kumagumo kusangana
• Bhizinesi rako riri kuda kuenda kunodzika dhadha
• Iwe unoda kutanga bhizinesi asi usingazive kuti sei uye sei
• Makwikwi ako ari kutora vatengi vako
• Iwe waizoda kuendesa bhizinesi rako kune rinotevera danho
• Iwe unonzwa kurudziro yekusiya makwikwi ako kumashure
• Iwe hauzive nzira yekufambira mberi mukuita kwako mabasa
Iyi mhete inokosha yeMammon ndeimwe yezvisikwa zvedu munguva pfupi yapfuura. Zvakatora kuyedzwa kwakawanda uye kukanganisa kuwana mhete ine simba sezvazvinogona nekuti mamoni haafarire kurairwa kutenderera asi muJune takazviita. Isu pakupedzisira takawana 100% inoshanda mhete nemasimba ane simba eMammon, mambo wehupfumi. Kurira bhero chero zviri pamusoro? Zviitire iwe nemhuri yako tsitsi uye muwane imi mhete yeMammon. Achakubatsira iwe kusvika padanho rinotevera. Hapana mubvunzo pamusoro pazvo.
Iyo huru inoyerera sirivheri mhete ne sigil yeMammon yakanyorwa uye yedu yakakosha yekugadza chikamu chikamu kuti uve nechokwadi chekuti ichashanda kwauri. Mhete zvakare yakanyorwa neakakosha kushevedza enn yemweya Mammon. Chinhu chete chaunofanirwa kuita ndechokupfeka. Hapana chimwezve, chakavimbiswa. Haufanire kupa kana kubayira chero chinhu. Mammoni anogara ainewe kuti akubatsire.
Iyi mhete inowanzo kuve yakapfekerwa pachigunwe chemunwe asi mimwe minwe ichaita zvakanaka futi.
Yedu amulet tester Bjorn akanyora chinyorwa chakakura nezve dzakasiyana mari mabhureki aakationgorora. Iye mutengesi wezvivakwa uye zvese zvine chekuita nebhizinesi uye hukama zvinomubata kuitira kuti avandudze sevhisi yake. Ane ruzivo nemapeni epabra yeAbraxas, iyo Abraxas amulet uye mhete, pini yemari lapel, pini yebhegi yeAsmodeus uye pini yemari yepamoni yeMammon. Kana iwe uchida kuverenga chirevo chake chakazara pazvinhu izvi, enda apa: kuyedza Mari amulets
Saizi Saizi Shanduko Tafura
Masese edu eringi ari makuru eUS.
Zvichienderana nenyika yako, ungangoda kushandisa iyo tafura yekutendeuka iwe yaunogona kuwana pano.